गाउँपालिकाको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत – News Of Nepal
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, मालिका गाउँपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका एवं बागलुङ जिल्लासँग मंगला गाउँपालिकाको सिमाना जोडिन्छ । मंगला गाउँपालिका साविकको कुहुँ, बाबियाचौर, बरंजा, अर्मन र दरबाङ गाविसको केही भागलाई समेटेर बनाइएको हो । जम्मा ८९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कुल २० हजार १६ जनसङ्ख्या रहेको छ । यसै गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य क्षेत्रमा के, कस्ता योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् र आगामी योजना के–के छन् भन्ने विषयमा मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानासँग रुप्से दैनिकका लागि अमृत बास्कुनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मंगलामा तपार्इँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा के परिवर्तन भयो ?
मंगला गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आउँदाको समय विश्व नै कोभिड–१९ सँग जुधिरहेको थियो, भने यस गाउँपालिकामा पनि संक्रमण बढ्ने क्रममा थियो । सुरुवाती समयमै गाउँपालिकाको कार्यालयलाई नयाँ भवनमा सारेर व्यवस्थित गरियो भने २ नं. वडा कार्यालय आफ्नो भवनमा व्यवस्थित गरियो । कार्यालय व्यवस्थापनले गर्दा सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काममा सहजता भयो, कर्मचारीहरुमा कोभिड संक्रमणबाट बच्न सहज भई सेवा प्रवाहमा ध्यानकेन्द्रीत भयो । मंगला गाउँपालिकाबाट सामान्य दुई प्रकृतिको कामहरु हुने गर्दछ । एउटा नियमित सेवा प्रवाह र अर्को विकास निर्माण । यी दुई प्रकृतिका कार्यहरुमा हुने प्रशासनिक कार्यलाई छिटो छितो, छरितो र सरलता ल्याउनको लागि हामीले उपलब्ध भएका कर्मचारीलाई स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौं । कामको लोड भएमा टिमवर्कमा गर्ने गरेका छौं र एक आपसमा सहयोग गरी काम सम्पन्न गर्ने वातावरण वनाएका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिबाट पनि हामीले पूर्ण सहयोग र प्रोत्साहन प्राप्त गरेका छौं । आम नागरिक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा समन्वयकारी भूमिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मैले निभाएको छु । काम गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्या र अवरोधहरुको बारेमा तत्कालै छलफलमार्फत समाधान गर्ने गरेका गर्छौं भने कर्मचारीहरुको बीचमा समय समयमा हुने स्टाफ मिटिङमा कार्यालय सञ्चालनसम्वन्धी समस्याको विषय, नयाँ कार्ययोजना, पिरमर्का र लुकेर बसेका समस्याहरु उजागर भई छलफल गर्ने गर्दछौं । गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र सबै शाखामा आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर, बिजुली, इन्टरनेट जस्ता भौतिक साधनको उच्च व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कमी भएको कर्मचारी थप गर्ने र उपलब्ध कर्मचारीलाई सिस्टममा आबद्ध गराई प्रोत्साहनका साथ काममा लगाउने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा विकाससम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नु र प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो, जुन कुरा हामीले अधिकांश पुरा गरेका छौं ।
समृद्ध, सुन्दर र समुन्नत गाउँपालिका बनाउन के–के योजनाहरु छन् ?
मंगला गाउँपालिकालाई समृद्ध, सुन्दर र समुन्नत गाउँपालिका बनाउनको लागि गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको गाउँपालिका अध्यक्ष र जनप्रतिनीधिको टिमले यो पाँचवर्षे कार्यकालमा समृद्ध, सुन्दर र समुन्नत गाउँपालिका निर्माण गर्न धेरै योजनाहरु बनाएर लागू भएका छन् । कर्मचारीबाट नीति तथा योजना निर्माणको क्रममा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहयोग गरिएको छ । पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा धेरै विषयहरु छलफलमा अभ्यास भई सफल भएका छन्भने केही क्षेत्रमा पुरा गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । गाउँपालिकाले धेरै योजनाहरु पूर्वाधार निर्माणतर्फ केन्द्रीत गरेको छ । सबै गाउँ, वस्तीमा कच्ची सडक पुगेको छ भने मुख्य सडकहरु स्तरोन्नति गरिएको छ । सबै गाउँ वस्तीमा खेलकुद मैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन निर्माण गर्ने तथा व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ । सबै गाउँ, वस्तीमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन पु¥याइएको हुँदा उज्यालो गाउँपालिका बनेको छ भने टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । कृषितर्फ धान, आलु र बाख्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी व्यवसायिक उत्पादनको कार्यलाई बढावा दिइएको छ । निजी तथा समूहमार्फत व्यवसायिक उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई कृषि सामग्री तथा निर्माण कार्यमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै सानो उत्पादनमार्फत उत्पादनमा सहयोग पु¥याउने साना कृषकहरुलाई कृषि सामग्री, पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रममा समेटिएको छ । अहिले पालिकामा रहेका सबै विद्यालयमा व्यवस्थित भवन बनेका छन् भवनको समस्या छैन । दरबन्दी कमी भएको र विषय शिक्षकको अभाव रहेको विद्यालयमा गाउँपालिकाले शिक्षक कोटा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । विद्यालयमा आवश्यक पर्ने भौतिक योजनातर्फ भवनको मर्मतसम्भार गर्ने, घेराबार लगाउने र भौतिक सामग्रीहरु गाउँपालिकाले उपलब्ध गराई सहयोग गरेको छ ।
गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र खानेपानीको क्षेत्रमा के, कस्ता योजनाहरु छन् ? साथै आगामी दिनमा यातायात सेवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
मंगला गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै कामहरु गरी उपलब्धिहरु हासिल भएको छ । नागरिकको असीमित आवश्यकता र चाहना तथा विकासको बदलिँदो रुप प्रविधिले मारेको फड्कोले गर्दा विकास कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । पहिलो ५ वर्षमा मंगला गाउँपालिकामा यी क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरु भएका छन् । त्यसमा पनि विकासको मुख्य संवाहक यातायात क्षेत्र हो, जसमा गाउँपालिकाले ठूलो लगानी गरेको छ, जुन निरन्तर हुन समेत आवश्यक छ । मंगला गाउँपालिका अन्तरगत ४० वटा सामुदायिक र २ वटा संस्थागत विद्यालयहरु छन् । सबै विद्यालयहरुमा व्यवस्थित भवन बनेका छन्, फर्निचर, खेलमैदानलगायत छन् । विद्युत, खानेपानी, इन्टरनेट र टेलिफोनको सुविधा पुगेको छ । केही विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको अभाव तथा विपद्को हिसाबले जोखिममा छन् । त्यस्तै केही विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको कमी भई विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने वा शिक्षक विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षातर्फको योजना भनेको विद्यालयहरुमा केही भवनहरु थप गर्ने, घेराबार लगाउने, खेलकुद मैदान निर्माण र मर्मतसम्भार गर्ने, फर्निचरलगायत शैक्षिक सामग्री चुस्तदुरुस्त राख्ने, विद्यालय सजावट गरी अध्ययन अध्यापनको वातावरण बनाउने योजनाहरु छन् । शिक्षकहरुको कमी हुन नदिन दरबन्दी व्यवस्थापन गरी समानुपातिक वितरण गर्ने तथा स्थायी शिक्षकको माग गर्ने, गाउँपालिकाले शिक्षक कोटाको व्यवस्था गर्ने योजना छ । शिक्षकहरुलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण गरी अपडेट गरिरहने, विद्यार्थीहरुलाई असल आचरणको विकास तथा पढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने योजनाहरु पनि छन् । विद्यालयलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाई स्मार्ट बोर्डमार्फत पठनपाठन गर्ने योजना छ ।
स्वास्थ्यतर्फ उपलब्ध ४ वटा स्वास्थ्यचौकीलाई अझ धेरै स्रोतसाधनसम्पन्न बनाई चुस्तदुरुस्त रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने योजना छ । सबै वस्तीको पायक पर्ने स्थानमा राखिएको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई भवन तथा अन्य आवश्यक स्रोतसाधनसम्पन्न बनाएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने योजना छ । गाउँपालिकास्तरीय १० शैयाको अस्पताल निर्माणको क्रममा रहेकाले यसलाई समयमै सम्पन्न गरी डाक्टर र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । गाउँपालिकाको प्रत्येक गाउँ, वस्तीमा फलामे पोलमार्फत केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भई विद्युत सेवा उपलब्ध भएको छ । अब यसलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन विद्युत प्राधिकरणसँग साझेदारी गर्ने योजना छ । म्याग्दीखोलाको पानी लिफ्टिङ गरी नदी छेउमा सिँचाइको लागि एउटा योजना सम्पन्न हुन लागेको छ भने अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्ने योजना छ । गाउँपालिकामा रहेका लघुजलविद्युतको संरक्षण गरी लघु उद्योगहरुमा उपयोग गर्ने योजना छ । गाउँपालिकाभित्र सबै वस्तीमा हाल खानेपानी सेवा उपलब्ध छ । पालिकाको करिब ५० प्रतिशत घरधुरीमा एक घर एक धारा निर्माण भएको छ भने बाँकी घरधुरीमा एक घर एक धारामार्फत नै खानेपानी वितरण गरी व्यवस्थित र सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने योजना छ ।
गाउँपालिकाको सीमा विवाद छ कि छैन ?
बेनी नगरपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकासँग यस मंगला गाउँपालिका जोडिएको छ । यी पालिकाहरुसँग मंगलाको कुनै पनि खालको सीमा विवाद छैन ।
तपाईँको गाउँपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी छन् ? अनि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी भएको छ ?
हाम्रो गाउँपालिकामा हाल पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । साविक जिल्ला विकास समिति र यस अन्तरगत साविकको गाविसमा कार्यरत कर्मचारीहरु र गाउँपालिकाबाट करार सेवामा भर्ना गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनाहरु बनेका छन् ?
मंगला गाउँपालिकामा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरु टोड्के, झाँक्रीपानी, चाँगा, तिनचुले, गम्फाको धुरी, चिनाकोट दरबार, लामा छहरा र दहताल हुन् । यी क्षेत्रहरुको विकासको लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सडकको पहुँच हो भने सोपश्चात् त्यस क्षेत्रमा होटलवास, होमस्टेको निर्माण, खानेपानी, ट्वाइलेट, बाथरुम जस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ जुन हामीले गरिरहेका छौं । स्थानीय अर्गानिक उत्पादन र तिनका परिकारसँग पर्यटकलाई जोडेर यस स्थानको पर्यटन वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । झाँक्रीपानी, चाँगा, तिनचुले, चिनाकोट क्षेत्रमा, चाँगा हामेस्टे विकास र विस्तार गरी स्थानीय कला संस्कृति तथा परिकारमार्फत पर्यटनको विकास गर्ने योजना छ ।
गाउँपालिकाभित्र जातीय विभेद, महिला हिंसा, बालविवाह जस्ता समस्या छन् कि छैनन् ?
यस गाउँपालिकामा जातीय विभेद, महिला हिंसा, वालविवाह जस्ता समस्याहरुको बारेमा गाउँपालिकावासी सचेत छन्, तर पनि यस्ता समस्याहरु यदाकदा देखिने गरेको पाइन्छ । यी समस्याहरुलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नको लागि गाउँपालिकाले सामाजिक सशक्तिकरण, जनचेतनाको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस पालिकाभित्र हुने यी समस्याहरुलाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमार्फत सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मंगलामा रहेको नेपालको छुट्टै महत्व बोकेको बरंजाको धुलेमेला संरक्षण गर्न केही योजना बनाइएको छ ?
यस गाउँपालिकाको वडा नं ४ को उलेना भन्ने स्थानमा लाग्ने धुले मेलाको संरक्षणको लागि सो स्थानमा विभिन्न पूर्वाधारहरु जस्तै स्टेजसहितको बृहत खेलकुद मैदान, पराङ हाल्ने कुनामा चौपारीसहितको लस्केरी (व्यवस्थित सिँढी, चौपारी, पुजाथान) निर्माण गरिएको छ । यस ऐतिहासिक मेलाको प्रचारप्रसारको लागि गाउँपालिकाबाट प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ । मेलाको प्रचारप्रसार तथा संरक्षण गर्नका लागि पालिकामार्फत आवश्यक सहयोग भैरहेको छ ।
अन्त्यमा, भन्नुपर्ने केही छ ?
गाउँपालिका जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो यस्तो स्थानीय सरकार हो जसले सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकको पिरमर्का सम्बोधन गर्नेदेखि गाउँपालिकाको विकास निर्माणलगायत सम्पूर्ण पक्षको सम्वोधन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैले गाउँपालिकाको संस्थागत विकास गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगाउन सकेमा राज्यको समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ । अन्त्यमा, आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलगायत पत्रिकाको सम्पूर्ण परिवारलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु । धन्यवाद !